Abavelisi kunye nefektri - China Umlilo hose reel kunye nekhabhathi Abavelisi
Inkcazo: IiReels zoMlilo ziyilelwe kwaye zenziwe ngokuthobela i-BS EN 671-1: 2012 kunye nethumbu elingagungqiyo elithobela i-BS EN 694: imigangatho ye-2014. Ulwakhiwo kunye nokusebenza kwethumbu lomlilo elinombhobho oqinileyo kuqinisekisa ufakelo olufanelekileyo kwizakhiwo nakweminye imisebenzi yokwakha esetyenziswa ngabahlali. Amanqwanqwa amathumbu omlilo angasetyenziswa ngaphandle kokutshintshiselana ...
Inkcazo: Indibano yokubeka umbhobho ibekwe ngaphakathi kwizakhiwo kwindawo emanzi okanye eyomileyo. Kukho indawo yokuxhoma apho kuxhonywa khona ithumbu lomlilo (30m) kunye nokudibanisa, umlomo, umbhobho wokulinganisa umbhobho wecala, i-hose rack ingono. ivumela amanzi ukuba ahambe ngethumbu emva kokususwa kwethumbu kunye nombhobho.I-rack ifumaneka ngobukhulu be-1.5 "kunye ne-2,5" .Zimbini iindlela zokufaka i-rack. Enye kukusebenzisa isibiyeli eseludongeni enye ukulungisa kwikona elungileyo v ...
Ikhabhathi yomlilo ithumbu lekhabhathi
Inkcazo I-hose reel reel ikhabethe yenziwe ngentsimbi epholileyo kwaye ikakhulu ifakwe eludongeni. Ngokwendlela, zimbini iintlobo: ikhefu inyuswe kunye nodonga inyuswe. Faka i-reel yokulwa umlilo, isicima-mlilo, umlomo womlilo, i-valve njl. Kwikhabhinethi ngokweemfuno zabathengi. Xa iikhabhathi zenziwe, ukusika okuqhubela phambili kwe-laser kunye neetekhnoloji ze-welding ezizenzekelayo zisetyenziselwa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso elungileyo. Zombini ngaphakathi nangaphandle kwekhabhinethi zipeyintwe, ngokufanelekileyo ngaphambili ...